Kude kube iApple isungule iApple Watch egqithisileyo, nazi ezinye izembozo zokuziqhelanisa nayo nayiphi na imidlalo | Ndisuka mac
Kude kube iApple isungule iApple Watch egqithileyo, nazi izimbozo zokuziqhelanisa nawo nawuphi na umdlalo
I-Apple Watch yenye yezi zixhobo ezinokuthi ziqwalaselwe njengemela yomkhosi waseSwitzerland. Kufanelekile ukuba usuku nosuku. Kuyanceda ukunqanda ukuba uhlala ujonga kwiselfowuni yakho. Siyikhathalela impilo yethu y isinceda ngokuziqhelisa imidlalo. Nangona kuyinyani ukuba iwotshi ejongeka intekenteke ngokuxhomekeke kwimidlalo esiyenzayo. Kodwa oko kusonjululwa ngoncedo kuthotho lwe-fezinye zilungile, zintle kwaye zitshiphu oko akuyi kusinceda kuphela kwimidlalo, sinokusebenzisa ezinye zazo yonke imihla.
Kuvele amarhe okuba iApple inokuthathela ingqalelo ukwenza I-Apple Watch eyomeleleyo kubo bonke abo baqhuba imidlalo. Ngaphezulu kwako konke, eminye imidlalo egqithisileyo enokubangela ukuba iwotshi iphele emhlabeni okanye yahlulwe kubini. Kodwa masingacingi ngezemidlalo kakhulu kwimiboniso bhanyabhanya. Ukuba uqhuba ibhayisekile, sele uyazi ukuba kunokwenzeka ukuba xa uthe wawa, iwotshi ayiyi kuphila. Ke sinokuthiya imisebenzi embalwa, kodwa inesisombululo esilula. Ezi zigqubuthelo sikubonisa zona ngoku kwaye ezingabizi konke konke kuthathelwa ingqalelo izinto ezikhuselayo.
1 I-Spigen Rugged Armor Pro
2 I-Spigen Tarm Armor
3 Ityala leSupCase
Uphawu Spigen iyafana nomgangatho kwiimeko zetekhnoloji. Oku kuyahambelana ngokukodwa kwiimodeli ze-Apple Watch 4, 5, SE kunye no-6 kuzo zombini i-40 mm kunye ne-44 mm. Yonyusa kuphela i-1,2mm ejikeleze isikrini. Ngale nto, kunokwenzeka ukunciphisa unxibelelwano olungafunekiyo lwescreen, oluqhelekileyo kolu hlobo lwesembozo. Yenziwe nge-TPU eguqukayo, inesakhelo, apho amaqhosha e-Apple Watch alingana ngokugqibeleleyo. Iyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo:
I-Spigen 44mm kwi-Army Green, emnyama okanye yeCarbon Gray ye- € 20.99
Imodeli ye-40mm kumbala oluhlaza okanye omnyama nge- $ 19.99
I-Spigen Tarm Armor
Siyaqhubeka nophawu lweSpigen. Lo mzekelo, ifayile ye- Isixhobo esomeleleyo Yinto encinci ngakumbi le yemihla ngemihla. Sisigqubuthelo somlindo kuphela, asiyibandakanyi imitya. Yenzelwe imodeli ye-44mm kwaye yenzelwe ukuhambisa iwotshi yethu kuyo yonke indawo. Ifumaneka ngemibala emithathu engacimekiyo, isilivere, emnyama kunye ne-mat emnyama. Ingena ngokugqibeleleyo kwaye amaqhosha eemodeli ze-Apple Watch 4, 5, SE kunye no-6.Yinto encinci kuneyokuqala. Ngeli xesha sithetha nge-2 mm ubukhulu, into engazukusikhathaza mihla le.
Isixhobo esomeleleyo seSpigen seApple yeWatch 44mm
Sihamba nelinye lawona matyala anexabiso ngabasebenzisi. Uphawu lweSupcase, ikwayingcali ekwenzeni izembozo zezixhobo zetekhnoloji, iyile ye-Apple Watch ekhusela ngokubanzi ngaphandle kokongeza ubukhulu okanye ubunzima obukhulu. Inika imvakalelo xa uyisebenzisa ukongeza itanki yokwenyani kuwotshi, kodwa hayi ngenxa yokuba inkulu kangakanani na ukuba ingekho ngenxa yokuba ikhuselwe kangakanani. Ayisiyiyo kuphela ukukhuselwa kwityala le-Apple Watch kodwa ikwabandakanya imitya enebhanti yokuvala kabini ukukhusela ngakumbi. Akukho mkhuseli owakhelweyo kwiscreen, kodwa ii-bezels eziphakanyisiweyo kufuneka zincedise ukukhusela isikrini. Icala lokusika libonelela ngokufikelela kwiDigital Crown, kodwa likhusela iqhosha lasecaleni ngokugubungela ngokupheleleyo. Iyafumaneka kwiimodeli ze-4, 5, SE kunye ne-6 kunye nobukhulu bamacala amabini akhoyo ngoku, i-44 kunye ne-40 mm.
Supcase ebomvu okanye emnyama ye-44mm nge- € 22.99
Supcase kwishishini nge-40 mm nge- € 22.99
Kwimarike kukho iimodeli ezininzi ezenzelwe ukukhusela kuphela imeko yewotshi kunye namaxabiso aqulathe kakhulu. Ababoneleli ngokhuseleko olunokubonelelwa zizigqubuthelo eziboniswe apha, ezidibeneyo kwaye ezinemitya eyakhelweyo. Kodwa kunjalo, banokukusindisa ukubetha kwemihla ngemihlaKukho iimeko ezithile ezinokubonelela ngokhuseleko olunzulu ngakumbi ngaphandle kokuyekisa i-aesthetics, ubunzima okanye ubukhulu bewotshi.
Umzekelo sinako ncoma oku ukusuka I-misxi nge- € 9.99 kwaye isebenza ngokujonga iiwotshi 4 ukuya phambili nge-44 kunye ne-40 mm. Ukuba ufuna kungabonakali kakhulu ukuba unxibe ikhava, oku kubonakala kwaye kwenziwe nge-TPU kulungile. Isebenza nge-44 kunye ne-40 mm kunye nee-Apple Watch iimodeli 4, 5, SE kunye no-6. Kwixabiso le-8.99 yiza ezimbini.
Ngelixa sibalindileyo ukuba bazise i-Apple Watch enamarhe kwezemidlalo, singaya kukhangela ezinye zezi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Kude kube iApple isungule iApple Watch egqithileyo, nazi izimbozo zokuziqhelanisa nawo nawuphi na umdlalo
Apha ungajonga ukuba idatha yakho ivuza na kuFacebook okanye kolunye uhlaselo